> Resource > masixi > Sida loo masixi Cell Phone Data
Marka aad go'aansato inay iska iibiso, dib ama ha iska bixin hore telefoonka gacanta, waxaad la kulmi dhibaato ku saabsan sida loo masixi macluumaadka telefoonka gacanta si ay u ilaaliso arimahaaga gaarka ah, sida maalmahan telefoonka gacanta waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nolosha oo uu kaydiyaa nooc kasta oo macluumaadkaaga shakhsiyeed waxaa ku, sida xiriirada, sirta, macluumaad credit card, sawiro, emails ama wax kale. Ka sokow, telefoonka gacanta la xado ama waxaa laga yaabaa in laga badiyay shil. Si looga fogaado kuwa xog qarsoodi ah oo muhiim ah si aad u hesho gacmaha shisheeye ah galay, waxa ay noqon doontaa caado wanaagsan in la tirtiro xogta la isticmaalin ama si qarsoodi mar walba.
Keddibna A celin doonaa telefoonka in goobaha ay warshad iyo tirtiro xogta ay, laakiin daydo telefoonka gacanta oo kala duwan waxay leeyihiin meelo kala duwan, si aad u baahan tahay tilmaamaha gaarka ah si ay u masixi diiwaanka , oo waxaa laga yaabaa in dhib badan aad u malaynayso. Haddii aad sii isticmaasho telefoonka gacanta iyo doonayaa inaan u masixi qaar ka mid ah macluumaadka xasaasiga ah , waxaad had iyo jeer ma u baahan tahay dib dhamaystiran. Halkan waxaan ku talinaynaa ah Eraser Data Cell Phone si aad u tirtiri macluumaadka telefoonka gacanta .
Sida loo isticmaalo Cell Phone Data Eraser?
Si aad u masixi macluumaadka telefoonka gacanta, waxaad u baahan tahay tirtire xogta in tani kuu sameyn karo ah. Wondershare WinSuite 2012 waa mid ka mid ah sida aad u.
Connect telefoonka gacanta si aad u PC, oo aad telefoonka ka muuqan doontaa PC ka yar "Qalabka la saari Kaydinta". Daahfurka Wondershare WinSuite 2012, u tag "Privacy & Security" menu iyo dooran "File Shredder" on bidix, taas oo kaa caawin kara inaad masixi macluumaadka telefoonka gacanta, iyo sidoo kale macluumaad sensetive ku kaydsan aad disk ama USB drive.
Tallaabo 1: Ku dar files telefoonka gacanta
Guji "Add Files", oo waxaa gujisid doonaa sanduuqa wadahadal file furan. Dooro phone files gacanta in aad rabto in aad masixi, guji "Open", ka dibna macluumaad faylka lagu dari doonaa liiska software daaqadaha sanduuqa. Waxaad riix kartaa "Add Folder" si ay u doortaan gal aan la rabin ee telefoonka gacanta iyo tirtiro dhammaan faylasha ee folder oo dhan.
Talaabada 2: saar files
Haddii aad doorato file qaldan ama folder in aadan rabin inay si joogto ah u tirtirto ka telefoonka gacanta, dooro kuwa files oo guji "saar Laga List", ka dibna file ee la doortay ama folder waxaa laga saari doonaa liiska.
Talaabada 3: masixi xogta telefoonka gacanta
Guji "iska indha tiri" in ay masixi oo dhan files telefoonka gacanta iyo fayl ku jira liiska. The files iyo xoolo aan la soo celin karin by qalab kasta, sidaas awgeed, fadlan xaqiijin hor qaliinka. Guji "Haa" loo wado hawlgalka, falgal.
Fiiro gaar ah: Xataa taleefannada gacanta ugu wanaagsan ee loo isticmaali doonaa haddii annagu uma baahnin ku saabsan sida aynu u isticmaalno, sidaa daraadeed waxa fiican in aadan isticmaalin taleefannada gacanta ee gaarka loo leeyahay in ay toogtaan photos / videos ama kaydka xogta muhiimka ah sida aqoonsigaaga, xisaab bangi iwm